Caasimadda Ankara ee Diyaar u ah Jiilaalka; Iyada oo dhicitaankii faa'idadii ugu horreysay ee sanadka, kooxaha Caasimadaha Magaalo Weyn ee Ankara, ay bilaabeen inay la dagaallamaan barafka duurka jooga. Kooxaha Qaybta Sayniska, halbowleyaasha waaweyn ee wata barafka, [More ...]
Cayaaraha Ankara Off-Season'19 Robot Tournament Martigeliyaha; Tartan Robot ah oo ay soo qaban qaabiyeen iskuulada gaarka loo leeyahay ee Tevfik Fikret ayagoo kaashanaya dawlada hoose ee Ankara iyo xarumaha iyo ururada badan; Istanbul, Samsun, Mugla, Corum [More ...]
Mansur Yavaş, Duqa Magaalada Ankara Magaalo Weyn, ayaa hoosta ka xariiqay codsiyada ka farxiya ardayda wax ku barata caasimada. Balanqaadyadii uu sameeyay Madaxweynaha Yavaş, oo sii waday inuu wax ku kordhiyo miisaaniyadda ardayda, sicir-dhimis ayaa lagu soo bandhigay markii ugu horreysay Ankara. [More ...]
Ankara YHT Maamulayaasha Dhibaatada Dhaawaca Bilaash ah
xakamaysada Traffic qareen Erbey, "Authority, wax kasta oo meel waa in la ciqaabi fal dhab ah iyo kuwa ka masuulka," ayuu yiri taariikhi 13 December 2018 ee naftooda ku waayay dad 9 shil YHT ee Ankara, dadka 93 ay ku dhaawacmeen [More ...]
Duqa Magaalada Ankara ee Caasimadda Mansur Yavaş ayaa fuliya ballanqaadyadiisa mid mid. Duqa Magaalada Yavaş wuxuu faray Golaha Dawlada Hoose ee Magaalooyinka in ay qaataan go'aan ku qancaya caasimadaha. Waraaqda madaxweynaha ayaa loo gudbiyey baarlamaanka [More ...]